Pisces uye TaurusUshamwari, Rudo, kugarisana & Kuroora - Zodiac
iphone 4 wont kuchaja kana kubatidza
iphone kudzima kuverenga maretiiti
dzosa zvakarasika manotsi pane iphone
sei paine maungira pafoni yangu
iphone 7 app chitoro chisiri kushanda
Pisces uye Taurus: kuenderana Rudo Hukama, Hushamwari & Kuroora
Pisces Taurus Compatibility Love Relationship
Taurus uye Pisces hushamwari
Pisces uye Taurus: kuenderana kwezviratidzo muhukama hwerudo, mune hushamwari, kubasa uye muwanano.
Vanhu vazhinji vanotenda zvechokwadi mune horosikopu uye kazhinji vanotendeukira kwavari kuti vawane iwo mutambo wakaringana. Funga kuenderana kwePisces neTaurus: vane chimwe chinhu chakafanana here kana kuti zviratidzo izvi zvakapesana chaizvo?
Icho chinhu chePisces Mvura. Ava vanhu vakangwara uye vane moyo munyoro vanowanzove mumawoko evanyengeri vane hunyanzvi nekuda kwekunzwisisa kwavo kunoshamisa. Ichi chiratidzo ndechekutanga pakati pevamwe mune chiyero chekufungidzira.
Vamiriri vake vanoenderana zvakakwana kune ese, kunyangwe mamiriro akaipisisa. Ivo havatyi matambudziko epamba uye maitiro. Nenzwisiso yakanaka iwe unogona kupfuura nemuyedzo yakawanda uine kushomeka kurasikirwa. Hove dzinowana nzira yavo nekukurumidza munzvimbo nyowani yebasa uye mune timu isingazivikanwe uye vawane nzira yakanakisa yekubuda mune yakaoma mamiriro. Yakagadzirira kuita kubatana kuti usvike kune zvako zvinangwa.
Vanhu vanozvarwa pasi pechiratidzo ichi vane tarenda rakanyanya uye vanogona kuzviratidza munzvimbo zhinji. Ivo vakanaka maartist, vatambi, vaimbi, vatevedzeri. Hove dzinoona zvakakwana uye nekunzwa runako, rwechipiri chete kuna Libra mune iri zano. Ivo vakagadzirira kugadzira pasina kunonoka uye vanovavarira iwo wepamusoro mhedzisiro, asi chete kana icho chinangwa chakaruramisa iwo akaneta masimba nesimba. Zvinotoshamisa kuti vamiririri veiyo watermark panguva imwe chete vane husimbe, uhwo pamwe chete nehunyanzvi hwekuita hunyanzvi hunopa mukana kune avo vane hunhu.
Kuzvidzora kwehove hakuna, izvo zvinoita kuti vazeze muzviito zvavo. Ivo vanotora nhanho kuenda kumberi uye kazhinji vanodzora nhanho mbiri. Vanogona kuve vasina hanya zvakanyanya kunyangwe nevanhu vepedyo. Ratidza kushaya simba kwavo, kwete kuda kwakasimba, uko kunowanzovashandura kuita nhapwa dzemamiriro ezvinhu.
Seimwe yeakanyanya kudanana zviratidzo, hove dzinotenda mune yakakura uye yakajeka kunzwa. Vanoda kuvhura uye kusafarira. Vaviri vachitsvaga yakareba uye yakaoma imwe. Asi panguva imwecheteyo, ivo vanowanzove neanoverengeka akakundikana hukama vasati vasangana nedanho ravo.
Taurus chiratidzo chenyika
Simba uye rakakwana. Vanhu vakadai vanozvitsaura kuburikidza nekutsungirira, kushanda nesimba, uye hunhu hunoshanda. Ivo vanoda nyaradzo uye pamatanho ese ehupenyu, shingairira kuigadzira. Vamiriri veichi chiratidzo vakaoma kutsungirira shanduko, saka ivo vanosarudza yavo yehupenyu nzira kwenguva yakareba, nekutya kukanganisa uye kukanganisa. Kushivirira kusingaperi chete kunobatsira vanhu ava kuti vagamuchire hupenyu sezvahuri. Taurus ine yakanaka intuition, ivo vanogara vachiongorora mamiriro acho kwenguva yakareba uye kuyedza kutsvaga nzira yakanakisa yekubuda.
Saina usingamhanyise, usashivirira kunetseka. Munhu akazvarwa pasi peiri boka renyeredzi achakwanisa zvirinani kumirira chiitiko chinobatsira pane kuzvikanda mudziva nemusoro wake.
Huchenjeri hwepanyika uye rudo rwebasa zvinoita kuti vanhu ava vafambidzane vakakodzera muhupenyu hwemhuri. Zviri zveTaurus zvaunogona kutaura nechivimbo kuti navo kunyange nzara nehondo hazvityise.
Mumwe mumiririri wechiratidzo chepanyika anogara achiedza kubatsira vamwe vanhu, uye haafarire zvachose, asingatarisiri kurumbidzwa nemubairo. Nekudaro, nehunonyengera uye hunhu hunhu, iye anopedzisa hukama hwese pasina kufunga. Anoziva kuregerera, asi panguva imwechete kuvimba kwake hakugone kudzoserwa.
Pakutanga kuona, munhu wese anofarira nzombe: ivo vakangwara, vanochengeta nguva, vane pfungwa yakanaka yekuseka. Vanoda kushandisa mari, asi pasina kutambisa. Zvisikwa zvinowanzovapa masimba emweya. Kazhinji vanhu vanozvarwa pasi pechiratidzo ichi vanove maporofita kana varapi.
Taurus inowanzo kuve nemoyo murefu wehafu yepiri, inosemesa hapana zvidiki uye hasha dzakaganhurirwa, ichitarisira kuita kweumwe wako, kudanana, uye kudzoka pabonde.
Taurus murume Pisces mukadzi: kuenderana
Taurus murume Pisces mukadzi anokwezva. Zviratidzo izvi hazviwanzo kugona kukurumidza kunzwisisa uye kutambidzana. Asi pfungwa yekuzvarwa yekungwarira haivabvumire kuti vapinde mukukonana. Kana Hove ari murume uye mukadzi wechiTaurus ari nechimwe chikonzero akamanikidzwa kutaurirana padhuze, ivo vanodarika makona ese akapinza uye vanokwanisa kutaurirana zvakakwana. Kunyangwe mune yekusafarira mumwe nemumwe, kujekeswa kwehukama hakuzoteedzere.
Izvi hazvireve kuti kusangana kwakadaro kwakakwana. Kudanana kwakasimba pabonde muchiso chemurume Pisces uye kushaya simba kwepasi muchimiro chemukadzi Taurus - vaviri havasi ivo vakakodzera. Iye murume anogara achiyangarara mumakore uye musikana, uyo asingamunzwisise, anopindura zvepamusoro kune mumwe wake. Hukama hwakadai hunogona chete kuvapo mune imwe kesi: apo vanhu vane chikwereti kune mumwe nemumwe chinhu. Mune zvimwe zviitiko zvinotaridzika seizvi: murume anoita zviito zvisingareve chinhu kune anoshanda mukadzi wepanyika (rose petals, mabhora, nziyo pasi pehwindo). Uye iye, zvakare, zvakare akamufinha iye.
Kunyangwe kushomeka kwekutenda kwakajairika, muchato wezviratidzo izvi unovimbisa kusimba. Kugara pamwe chete kuri kure kure nenguva yemaswiti-bouquet, saka vakaroorana vanogona kuwirirana pamwechete. Dame Taurus ndiye achave iye mugadziri weimba, achiponesa murume wake kubva kumatambudziko ese epamba, achibata nematambudziko ese. Murume wePisces anowedzera kubata kwekudanana kune hupenyu hwezuva nezuva. Uyezve, havawanzo kunyunyuta pamusoro peumwe neumwe. Munhu wese akabatikana nekambani yake. Iko kufurira kunoitwa kune mumwe nemumwe kwakanakira mapato ese ari maviri: murume anowana maonero echokwadi epasirese uye musikana anodzidza kureruka maitiro kuhupenyu.
Taurus uye pisces kushamwaridzana kuenderana. Panyaya yehukama, hazvigoneke kuti ichashanda. Mushure mezvose, havana chekutaura nezvazvo. Bhodhi rimwe nerimwe rine nzvimbo yaro yekufarira, isinganzwisisike kune imwe. Muroti uye realist uyo anogona chete kuva nehurukuro dzisingaperi. Uye sezvo kutaura kwemahara kwekushatirwa kusiri kwekunanga kuzviratidzo zvese, ivo vachatanga nekuunganidza zvakashata manzwiro, vachitarisana nekusafarira kukuru kune mumwe nemumwe. Kunyangwe vari vanhu vepedyo kana hama, Hove neTaurus havazokwanise kutaura zvakadzikama uye zvinovaka.
Vakadzi vanowirirana sei Pisces nevarume Taurus
Aya mabhureki anowirirana zvakakwana. Pisces mukadzi uye murume weTaurus - mumwe weakanyanya kuroora. Chokwadi hatingararame pasina kurwa. Asi vaviri ava vakagadzirira kugadzirisa pachena nyaya dzinokakavara, pasina kunetseka uye mhirizhonga. Ivo vanoratidza kunzwisisana uye kunzwira mumwe nemumwe, vanokwanisa kuita bhizinesi pamwe chete, kushanda pamwe chete muchikwata. Mukusangana kwakadai, mukadzi jenareta wemazano uye murume ndiye anovaita.
Rudo rwezviratidzo izvi, kana rukasagara kweupenyu hwese, zvirokwazvo zvinotora nguva yakareba. Iyo Taurus, ine zvinhu zviri pasi, yakasimba uye yakasimba sedenga repasi. Sarudzo dzake hadzina kuzununguka, iye achaita chero chinhu kuhwina moyo wewaanoda. Murume akadai kurota kunoitika. Iye akakwana murume wemhuri, kumashure, madziro. Akadzikama, anongotaura nezvezvinhu, haatsvaki zvikanganiso mumukadzi, haa'chera 'mune zvakapfuura. Gara pano uye ikozvino. Haanyare kusangana nevabereki vake neshamwari.
Uye mumiriri weakanyanya kudanana uye echisimba chiratidzo chePisces anotyaira iro rakasimba bonde kupenga nechitarisiko chake. Musikana uyu anodisisa zvekurota, achiyera pamuganhu wefungidziro uye chokwadi. Anogara aine chaanotaura. Mazuva ese anofadza mumwe wake nekushamisika kutsva. Anoshamisira uye asinganzwisisike, asi panguva imwe chete asina hunhu hwese. Husiku hwerudo hunogona kushanduka kuita ngano. Zviratidzo zvinowirirana zvakakwana mune zverudo.
Hukama muwanano kwavari hauchinje zvachose. Mushure mezvose, vaviri vakaroorana vanoisa mhuri pamberi. Iye mukadzi hapana chimwe kunze kwekumba uye angangodaro asingafare mazuva ese nemadhishi akanaka uye pasi yakagezwa kupenya. Asi murume haangaite chero mhosva pamusoro pake nekuda kweizvi. Anodiwa uye anodikanwa, senge ngano, mumaziso ake anogara akanaka uye anofanirwa nekanganwiro.
Asi iyo yechipiri hafu inogutsikana nemurume wake: bhizinesi, kuzviriritira, kutarisira - hapana chekunyunyuta nezvazvo. Ndiwo aya mapoka evakaroorana avo vangangodaro vachizorambana - murume akakomba uye mumwe mukadzi mucheche. Mumhuri idzi hamuna nzvimbo yezvinyadzo uye kujekeswa kwehukama.
Nekuda kwehunhu hwemunhu, Taurus nePisces havana huwandu hwakawanda hwevanhu vepedyo. Asi ivo vanogona kuunza zvakajairika zvido pamwechete. Varume vepasi vanowanzo kuda musikana anoyemura kugona kwavo kwepfungwa uye simba. Chiratidzo chemvura chemusikana chichava chakasununguka kutaurirana neshamwari yakadaro inonakidza uye yakangwara. Hukama hwakadai hunogona kukurumidza kuchinja kubva pahunhu hwese kuenda kuhukama hwerudo.
Horoscope kuenderana kunotaura zvakanyanya mukufarira vaviri, kana murume ari Taurus, uye mukadzi ari Pisces. Asi iyo inopesana nemamiriro ezvinhu zvakare inogoneka mumashure ehukama hwakasimba hwewanano.
Izvo zvakanaka zvinhu zvinosanganisira:
Kuzvimirira kwemari Taurus.
Kwete-kupokana kwevese vari vaviri.
Kutsvaga kwehupenyu hunoenderana.
Iko kugona kwekugadzira kwePisces.
Izvo zvakafanana tsika.
Rudo rwekugovana nguva.
Chido chisina udyire chekuda uye kudiwa.
Asi kunyangwe vakaroora vakaringana vane mativi asina kunaka:
Anopikisa mukadzi Taurus.
Kusashivirira kwekuchinja muTaurus.
Taurus nePisces muhukama hazviwanzo kutora iwo iwo iwo maitiro akafanana.
Nekudaro, iwo mukana wekubudirira kweavo vavakaroorana unotonyanya. Vamiriri vemabhodhi aya vane mukana wakanaka kwazvo wekuvaka hukama hwakasimba, husina makakatanwa.
Zodiac inoenderana zviratidzo - chimwe chinhu chine nharo. Haasi munhu wese anosarudza kutsvaga wekufambidzana naye zvichienderana nemutemo uyu. Asi vazhinji vane kutenda mukubudirira uye chokwadi chekufungidzira kwekuongorora nyeredzi. Saka wadii kuedza. Kunyanya apo nyeredzi pachadzo dzinofanotaura kubatana kwakakwana.
Aries murume neRibra mukadzi: kuenderana kwezviratidzo mu…
1961 Chinese Chinese Zodiac - Simba, Kushaya simba,…
1965 Chinese Zodiac - Simba, Kushaya simba,…
Mukadzi weAries nemurume weVirgo: kuenderana kwezviratidzo mu…
1953 Chinese Zodiac - Simba, Kushaya simba,…
Libra neVirgo: kuenderana muRudo Hukama,…